Uyabubula uBarker ophoxwe yiSundowns esethembile koweNedbank Cup - Impempe
Uyabubula uBarker ophoxwe yiSundowns esethembile koweNedbank Cup
Baphume bejabhe kanje abadlali beStellenbosch FC ngemuva kokuhlulwa yiMamelodi Sundowns emdlalweni weNedbank Cup ngoLwesithathu
Usale encela isithupha uSteve Barker opheka iStellenbosch FC ngemuva kokuthi iMamelodi Sundowns ibajikele endleleni sebebheke kumaphenathi emdlalweni weNedbank Cup ngoLwesibili.
Bese kusele imizuzu emithathu ukuthi kuphele umdlalo esikhathini esengeziwe bese kuyiwa phansi kwepali iyoqedelwa khona indaba, kodwa uPeter Shalulile wakuchitha konke lokho eshaya igoli lokuwinisa iSundowns ngo 3-2.
“Bese sicabanga ukuthi kuzoyiwa kumaphenathi, kodwa ngebhadi akwangabe kusenzeka,” kusho uBarker ngemuva kwalo mdlalo obuseLotus Versveld ngoLwesithathu.
“Kumele siyincome iSundowns, indlela edlale ngayo ibe nokubekezela. Kodwa nami ngiyaziqhenya ngabadlali bami. Bakhombise ukuzinikela, angibasoli ngalutho kodwa ke ngiphoxekile ukwehlulwa ngale ndlela okwenzeke ngayo sesibheke amaphenathi,” kubeka uBarker.
Uthe uzibonile ozimpawu zokuthi bayibambe ngakho futhi akusekude babe yilento ayifisayo lo mqeqeshi owazakhela igama esakwi-University of Pretoria la akhiqiza khona abadlali Okinawa kubo o-Andile Jali noBongani Zungu.
“Sisebenza kanzima ukwenza abadlali badlale ngokuzinikela futhi bazikhandle. Sifuna ukuba yiqembu elilwayo nelingafuni nebhola bese saziwa ngokuthi alufakwa lubuya nodaka la kithi.
“Kodwa futhi sifuna ukuthuthukisa indlela esidlala ngayo, sakhe bese sisebenzisa amathuba okushaya amagoli. Lokho akulula neze, kodwa ngiyaziqhenya ngabadlali bami.
“Uma uhlulwe emdlalweni onjengalona, uphuma uzigqaja ngokwenziwe ngabadlali bakho,” kulanda uBarker.
Uzigqaja kufanele uBarker kwazise abadlali bakhe basebenzile yize bengakuzuzanga abebekufisa. Bafike bakora kuqala, yabuya iSundowns kungakapheli sikhathi esitheni yalinganisa.
Kuthe umdlalo usuphela, yakora iSundowns yabonakala seyiwinile kodwa babuya abafana beStellies bashaya elokulinganisa elenze kwadlulelwa esikhathini esengeziwe.
Previous Previous post: UZuma ubona kuzoba nzima kwiChiefs ukudlala neRichards Bay
Next Next post: URomeo ucela ukuthi abakhanyisele kukho konke uMadisha ongasekho